Home Wararka Gudaha Sawirro: Sidee Xasan loogu soo dhoweeyey Abu Dhabi?
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta u ambabaxay dalka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa goordhow gaaray magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalkaas.
Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta inta aanu xilka qaban u ololeyn jiray in la hagaajiyo xiriirka Imaaraadka Carabta, maadaama ay si weyn isugu xiran yihiin Soomaalida, oo ay wadaagaan dano ka waaweyn kuwa Qatar, si gaar ahna ganacsiga
Si kastaba, Radio Halgan ayaa fahansan in madaxweyne Xasan Sheekh uusan wax dan ah la lahayn inuu colaadiyo Qatar, balse uu doonayo in Soomaaliya ay dhammaan heshiis la ahaato dalalka gobolka, taasi oo qeyb ka ah siyaasaddiisa; Soomaali heshiis ah, dunida na heshiis la ah.
Sawirro: Sidee Xasan loogu soo dhoweeyey Abu Dhabi? pic.twitter.com/VG4NXpjZAO
— RADIO HALGAN (@rhalgan) June 19, 2022
Previous articleDuqa Muqdisho oo Hay’adda IOM kala hadlay wax u qabashada dadka kasoo barakacay Abaarta
Next articleMadaxweynaha Ukraine Oo Booqasho Naadir Uga Baxay Kiev, Kuna Tagay Jiidda Hore
Suuriya ayaa Israa’iil ku eedeeysay in saakay ay ku soo qaaday...
DEGDEG Bankiga Dhexe oo shaaciyey sababta shatiyo loo siiyey bankiyo caalami...